Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ - စစ်သည်များနှင့်ဘက်ချက်စီစီဒီ - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - Rectify သည်အဆင့်သတ်မှတ်သည် Daredevil ရာသီ ၂ - Jon Bernthal ၏ပုံများကိုအပြစ်ပေးသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ Netflix ရုပ်ရှင် က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ - ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင်ပြင်ဆင်သည်
ယခုအပတ် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းဟောင်းကိုသွားနေပြီဖြစ်သည် Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid နှင့် အဆိုပါစစ်သည်များ။
ငါသိတယ်ငါသိတယ်! ရုပ်ရှင်အဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်းစက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူအများစုကငယ်ရွယ်တဲ့လူ ဦး ရေစာရင်းထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာကြီးကျယ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ၊ ကြီးကျယ်တဲ့ရုပ်ရှင်နှစ်ခုကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ် Netflix , တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏လူငယ်ကစားဖော်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်ဖြစ်စေဤရုပ်ရှင်နှစ်ခုသည်မည်မျှကြီးကြောင်းသိစေရန်လိုအပ်သည်။
Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid
Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကဘိုလီးဗီးယားသို့ယူအက်စ်မှထွက်ခွာသွားသည့်တကယ့်ဘဝရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူ Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid အပေါ်အခြေခံသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Paul Newman နှင့် Robert Redford တို့သည် Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid တို့ဖြစ်ကြသည်။
BCSK မကြာခဏ All- အချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များထဲမှထည့်သွင်းစဉ်းစား! ၁၉၇၀ တွင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆုအပါအဝင်အော်စကာဆုလေးဆုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါစစ်သည်များ အမည်ရစာအုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် အဆိုပါစစ်သည်များ Sol Yurnick ကရေးသားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်များတွင် Coney ကျွန်းမှ Warriors လမ်းပေါ်ရှိလူဆိုးဂိုဏ်းသည်အခြားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏လူသတ်မှုအတွက်ဘောင်ခတ်ထားသည်။ အခြားနယူးယောက်ဂိုဏ်းအားလုံးကသူတို့ရှာဖွေနေစဉ်စစ်သည်များသည်အိမ်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။
ရုပ်ရှင်နှစ်ကား၏ Butch Cassidy နှင့် Sundance Kid အော်စကာဆုကိုသက်သေပြရန်အော်စကာကိုအနိုင်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ဝေဖန်မှုများစွာရှိသည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါစစ်သည်များ အောက်ပါကြီးမားတဲ့အစွန်းရောက်စုဝေးစေခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးရုပ်ရှင်ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ရှိသည်မဟုတ်လျှင်သင်ကျိန်းသေသူတို့ကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုနောင်တမဟုတ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေး!
သငျသညျရုပ်ရှင်ရှာနေနေလျှင်, Netflix ရှိအကောင်းဆုံး 50 ရုပ်ရှင်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ကျန်စစ်ဆေးပါ။
ထိုရုပ်ရှင်များသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမခံရသေးပါက Netflix နှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် ၅၀ ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ သည်အခြားအကြီးအရွေးခြယ်သည်။
နောက်ကျောအပေါ်လာမယ့် wentworth သောအခါ
netflix အပေါ် seth rogen ရုပ်ရှင်
netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲအပေါ်နှလုံးရာသီ6ခေါ်သောအခါ